သင်သိပါသလား? Monopoly board game ကိုဘာကြောင့်တီထွင်လိုက်ပါသလဲ?
သိပါသလား? Monopoly board game ကိုဘာကြောင့်တီထွင်လိုက်ပါသလဲ?
1904 မှာ Lizzie Maggieက “The landlord game” နဲ့ အများပြည်သူကို မြေခွန်/ဓနရှင်စနစ်နဲ့ အတူပါလာတဲ့ လက်ဝါးကြီးအုပ်စိုးမှုအကြောင်းကို ပညာရေးဗဟုသုတ အ​နေနဲ့ သင်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ချက် နဲ့ တီထွင်လိုက်တာပါ။ သူမဟာ “The Landlord game”ကို ရောင်းဖို့စိတ်ကူးမရှိခဲ့ပါဘူး။
ထိုအချိန်မှာ ဒီgame လေးကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ အလွန်ခက်ခဲပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကြားမှာ လူကြိုက်များလာပြီး ရေပန်းစားလာသော game တစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ New York/Boston က လူတွေကလည်း ထိုgameကို ဆော့ချင်သော်လည်း ဝယ်လို့မရသောကြောင့် the landlord game ကို အခြေခံပြီး ကိုယ်ပိုင်version တွေ တီထွင်လာပါတယ်။
The landlord game နဲ့ monopoly က ဘာကွာသလဲ?
The landlord game က Original version ဖြစ်ပြီး monopoly လေးကတော့ landlord game ကိုအခြေခံပြီး ထပ်ထွက်လာတဲ့ version တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။Landlord's game ရဲ့ အခြေခံကစားနည်း ၂ခုကတော့ Monopolist ဆိုတဲ့ လက်ဝါးကြီးအုပ်စနစ် ရယ် Anti-monopolist ဆိုတဲ့ လက်ဝါးကြီးအုပ်တိုက်ဖျက်ရေးစနစ် ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ Player အများစု သိထားကြတဲ့ ကစားနည်းကတော့ Monopolist ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကစားနည်းမှာ သင်က မြေကွက်တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီဆိုလျှင် ထိုမြေကွက်ပေါ်သို့ရောက်လာသော အခြားplayersတွေဆီမှ အကောက်ခွန်ကောက်ပါတယ်၊ ဤစနစ်အရ ချမ်းသာသောလူထုမှာ ဆင်းရဲသောပြည်သူတွေထံမှ ခေါင်းပုံဖြတ် အမြတ်ကြီးစားနေခြင်းကြောင့် ဤစနစ်ကို လက်ဝါးကြီးအုပ်စနစ်ဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Anti-monopolist စနစ်မှာတော့ player တစ်ယောက်က မြေနေရာတစ်ကွက်ဝယ်လျှင် အခြားplayersတွေကို အခွန်ဆောင်ရပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ ချမ်းသာတဲ့လူတွေကို အခွန်ဆောင်ခိုင်းပြီး ဆင်းရဲတဲ့ပြည်သူတွေဆီ ပြန်လည်ဝေမျှပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ 1930 နောက်ပိုင်းတွင် Great Depressionဟုခေါ်သော ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစီးပွားရေးကျဆင်းမှုကြီးဖြစ်ပွားချိန်တွင် ပြည်သူတွေကြားမှာ the landlord's game လေးက ရေပန်းပိုစားလာခဲ့ပြီး Monopolist game လို့ စတင်ခေါ်လာကြတယ်
အဓိက အကြောင်းရင်းကတော့ လက်ရှိစီးပွားရေးကျပ်တည်းနေချိန် လုပ်စရာမရှိချိန်တွေမှာmonopolist game ကို ပိုဆော့လာကြတယ်၊ ဆင်းရဲသားပြည်သူတွေက ထိုgameလေးထဲမှာတော့ ချမ်းသာတဲ့ အရင်းရှင်တွေအဖြစ် သူတို့ရဲ့ စိတ်ကူးယဥ်အိမ်မက်တွေကို တည်ဆောက်လာနိုင်ပါတယ်။
Modern Monopoly - Present version ဘယ်လိုပေါ်လာသလဲ?
1932ရဲ့ ညနေခင်းတစ်ခုမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံ Philadelphia မှ Charles Darrow ဆိုတဲ့ စက်ပြင်သမားလေးဟာ သူ့အိမ်နီးနားချင်းတွေနဲ့ ညစာစားရင်း ထို landlord's game လေးကို ပထမဆုံးဆော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက်ပိုင်းတွင် Darrow ဟာ လူကြိုက်များသော the landlord's game လေးကို ကိုယ်ပိုင် version လေးတစ်ခုထုတ်ပြီး monopoly ဟု နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။
1936တွင် Darrow ဟာ သူ့ရဲ့ monopoly gameလေးကို Parker Bros Company ကို မူပိုင်ခွင့်ရောင်းပေးခဲ့ပြီး Monopoly game ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးဆီသို့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ထိုအချိန်မှစ၍ monopoly gameလေးဟာ ကမ္ဘာ့ ရောင်းအား အကောင်းဆုံး board gameတစ်ခုဖြစ်လာပြီး အခုရေ သန်း ၂၅၀ ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုဆိုလျှင် monopoly game လေးဟာ ဘာသာစကား 47 ခုဖြင့် ဘာသာပြန်ထုတ်လုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Fun Fact : How old is Monopoly? 84 years 75 years 90 years
Ans: 84 years ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ… အခုဆိုရင်တော့ ဘော်ဒါတို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ monopoly game လေးရဲ့ ရာဇဝင်လေးကိုသိကြပြီးပြီဆိုတော့ မေးခွန်းလေးတွေ အပျော်ဖြေကြည့်ရအောင်…
Charles Darrow ဟာ ParkerBro Company ကို monopoly gameရဲ့ မူပိုင်ခွင့်ရောင်းပေးပြီး မီလီယံနာတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒါဆို မူလ the landlord's game ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Lizzie Magie ကရော Parker Bro ဆီမှ မူပိုင်ခွင့်ဘယ်လောက်ရရှိခဲ့ပါသလဲ??? $500 $10,000 $200,000
Ans: အဖြေမှန်ကတော့ $500 ဖြစ်ပါတယ်။
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် မူရင်းပိုင်ရှင် Magie ဟာ ပြည်သူကိုအရင်းရှင်စနစ်အကြောင်း ပညာပေးချင်တဲ့ စေတနာအတွက် ပြန်ရရှိခဲ့တာကတော့ $500 ထဲပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အတုခိုးပြီးထုတ်လိုက်တဲ့ monopoly game ကြောင့် အခွင့်အရေးကို အသုံးချတတ်တဲ့ စီးပွားရေးရှင် Darrow ကတော့ မီလီယံနာတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ Magie ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ပိုက်ဆံရဖို့မဟုတ်ပဲ အရင်းရှင်စနစ်မကောင်းကြောင်းကို လူထုကိုသိစေချင်ခဲ့တဲ့ စေတနာကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့သင် နောက်တစ်ကြိမ် monopoly game လေးဆော့ရင် Lizzie Magie ရဲ့ မူလ မှာတမ်းလေးကို သတိရပေးပါ... မူလversion ဖြစ်တဲ့ the landlord's game လေးကြောင့်သာ မဟုတ်ရင် ယနေ့ monopoly game ဆိုတာလည်း မပေါ်လာနိုင်ပါဘူး ဘော်ဒါတို့ရေ… 😀🙂😇
8 Tips that I have learned from designing my first card game
သင်သိပြီးပြီလား။ Uno မှာ wild +4 card ကသုံးချင်တိုင်း သုံးလို့ မရပါဘူး။
Card and Board Games Retailer